Puntland & Jubbaland oo jawaab deg deg ah ka bixinaya qoraalka... - Awdinle Online
Puntland & Jubbaland oo jawaab deg deg ah ka bixinaya qoraalka…
Wasiirka Arrimaha Gudaha maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa sheegay in Puntland ay jawaab rasmi ah ka bixin doonto qoraal xalay saqdhexe kasoo baxay Villa Soomaaliya oo ku aadan doorashooyinka.
Waxaa uu sheegay in Puntland ay bixin doonto jawaabta ku haboon, waxaana sida wararka ay sheegayaan ay u badan tahay in ay diidi doonto.
Dhanka kale dowlad goboleedka Jubbaland ayaa laga sugaya in ay go’aan kasoo saaraan qoraalka kasoo baxay Villa Soomaliya.
Madaxweynaha Muddo Xileedkiisa uu dhammaday ee Farmaajo ayaa shir iskugu yeeray Madaxda Dowladdaha xubnaha ka ah DF iyo Gobolka Banaadir.
Previous articleC/raxmaan Cabdi Shakuur oo wax lagu qoslo ku tilmaamay…
Next articleXildhibaan ka tirsan Somaliland oo u geeriyooday COVID-19